iPhone 6s - iPhone News | Wararka IPhone
Isaga oo dhan Apple iPhone 6s. Warar, cusbooneysiin, qalab, casharro iyo tabaha loogu talagalay moobiilka cusub ee Apple 2015. Soo ogow astaamaha iPhone 6s oo u bood bood jiilka dambe.
Noocyada iPhone 6s
Ku qalabaysan processor-ka Apple A9, iPhone 6s waa mid dhaqso badan oo ka tamar badan wax ku ool ah, wax saameyn togan ku leh nolosha batteriga. Ma iloobi karno 2 GB RAM xasuusta iPhone 6s, waa wax kuu oggolaan doona inaad heysato codsiyo badan iyo boggag internet oo furan gadaal adigoon dib u cusbooneysiin. Dhanka waxqabadka, Apple A9 wuxuu leeyahay processor 70% ka awood badan Apple A8 iyo GPU ilaa 90% ka karti badan.
Cusub cusub iPhone 6s kamarad dambe Waxay ballan-qaadaysaa inay sawirro ka fiican ka qaaddo xaalad kasta oo iftiin ah iyada oo ay ugu wacan tahay dareemaheeda cusub ee 12 megapixel, hagaajinta fiiqnaanta iyo muujinta faahfaahinta sida moobiilka kale ee Apple uusan sameyn. Si fudud waa cajiib. Sidoo kale waxay awood u leedahay inay duubto fiidiyowyo 4K ah.
In kasta oo naqshadda iPhone 6s ay la mid tahay ta iPhone 6, haddana waxaa jira isbadalo badan oo Apple ay ku soo kordhisay gudaha mobilka cusub iyadoo ay wadato guryo cusub oo aluminium ah oo gaaraya 7000, 4,7 inch screen leh 3D Touch iyo xallinta 1334 x 750 pixels, jiilka labaad ee Touch ID sensor si dhakhso leh u bixiya adoo adeegsanaya Apple Pay oo ku qalabaysan iOS 9.
Ku raaxayso ah cusub iPhone 6s oo dooro midabka aad ugu jeceshahay: cirro cirifka ah, dahab, qalin leh weji cad ama midab casaan cusub oo waliba ballan qaadaya inuu yahay iibiyaha ugu fiican.
Warar ku saabsan iPhone 6s
IOS 16 ma la jaan qaadi doono iPhone 6s iyo iPad Air 2 iyo kuwa kale
Waqtigaan, labadii sano ee u dambeeyay, waxaan daabacnay maqaal, xantu waxay tilmaamaysaa in ...
Waxay umuuqataa in la xaqiijiyay in iOS 15 uusan gaari doonin iPhone 6s ama asalka iPhone SE
Marka nooc cusub oo iOS ah uu ku dhaco suuqa, aaladaha iswaafajiyana si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay, ...
Apple waa mid kamid ah shirkadaha sida aadka ah u daryeela macaamiisheeda waxaanan taas uga idhi khibradeyda gaarka ah ee ...
Apple waxay bilaabeysaa olole ay ku xayeysiineyso iPhone 6s "Lagu sameeyay Hindiya"
by Kariim Hmeidan samee 3 sano .
Wax badan ayaan ka hadalnaa dhaqdhaqaaqa ragga ka socda Cupertino markay go'aansadaan inay qalab ku soo bandhigaan suuqa, bandhigyada ...
Kusoo hel 128GB iPhone cusboonaysiin ah wax ka yar € 200
by louis padilla samee 3 sano .
IPhone-yada cusub ayaa halkan jooga, waxayna ku yimaadeen qiimo aad uga badan € 1000, waana inaad ...
Waa run in mararka qaar aan aragnay baytariyada oo gubanaya ama xitaa adeegsadayaal ay ku gubteen cillad qaar ...
Kahor iyo kadib iPhone 6S kadib badalida batariga
Haddii ilaa hadda aadan wali ogaan, waxaa lagugu xiray god. Apple ayaa laga aqoonsan yahay ...
IOS 10.3 Beta 1 vs iOS 10.2.1, xawaaraha iyo waxqabadka imtixaanka
Toddobaadkan dhexdiisa oo aan ku dhowdahay inaan dhammaano, ragga ka socda Cupertino waxay sii daayeen nooca ...
Wadahadal macaamil wada jir ah oo ka dhan ah Apple ee Shiinaha dabka iPhone 6s
by Jordi Gimenez samee 5 sano .
Apple waqti fiican kuma haysto baytariyada iPhone 6s tusaale ahaan waxaan horey u haysanay ...
Apple waxay diyaarisaa qalab lagu baaro dhibaatooyinka batteriga
by Alvaro Fuentes samee 5 sano .
Dhowr maalmood ka dib daabacaadda bayaan ku saabsan bogga Apple ee Shiinaha ee ku saabsan dhibaatada ...
by Kariim Hmeidan samee 5 sano .
Ma jiraan wax kaamil ah, taasina waa sababta ay u jireen qalab badan oo iDevices ah oo helay midka aan fiicnayn ...